I-Synephrine HCL Powder - Isishisi samafutha nezithasiselo zokwehlisa isisindo
I-AASraw ikhiqiza izimpushana ze-NMN ne-NRC ngobuningi!
AmaReagents eR & D
/Blog/Gallery/I-Synephrine HCL Powder - Isishisi samafutha nezithasiselo zokwehlisa isisindo
Posted on 11 / 25 / 2019 by 阿斯劳 wabhala ku Gallery.
1. Ukubuka konke kwe-Synephrine HCL
Namuhla, iphesenti eliphakeme labantu lifuna izinketho zokugcina isisindo esinempilo. Well, phakathi kwabo bonke, ukusetshenziswa I-Synephrine HCL powder ingenye yezindlela eziphephe kakhulu ongawagcina ngayo amanoni angenampilo. I-Synephrine powder iyinhlanganisela yamakhemikhali e-alkaloid engajwayelekile ukuyithola. Kuyinto engokwemvelo etholakala ezitshalweni ezinjengewolintshi elibabayo, phakathi kwabanye.
Kungumsebenzi oyisisekelo we-bioactive ku-orenji obabayo ukusetshenziswa kwawo kuqale emuva kuma-1500s. Ngakho-ke yayisetshenziselwa ini? Esikhathini esedlule, lokhu kuxhaswa ngemilingo bekulokhu kusetshenziswa ekwelapheni izindaba zesisu njengokuqunjelwa, ukugayeka, isicanucanu. Ezingxenyeni ezithile zomhlaba, futhi kwaziwa ukuthi njenge-anticonvulsant esebenzayo kanye nomuthi wokungalali nokukhathazeka.
Ngokuqala kobuchwepheshe, i-orange ebabayo manje isibonakale ilusizo olukhulu ekwelapheni izinkinga zanamuhla ezisukela ekuthelelekeni kwamagciwane kanye namagciwane, ukungezwani komzimba nezinkinga zesisu. Ukhumbula ukuthi isakhi esiyinhloko sewolintshi obabayo yiSynephrine HCL, sikunikeza isizathu sokuthi kungani siqukethe izimfanelo eziningi zokuphulukisa.
Isakhiwo se-Synephrine powder yamangqamuzana siyefana naleso se-ephedrine, engenye yezinto ezinkulu kakhulu ezishisa amafutha. Noma kunjalo, Efdrine akusekho emakethe njengesengezo sokudla; ngakho-ke, iSynephrine ingena esikhundleni sayo esihle kakhulu. I-Octamine iyi-metabolite kaSynephrine futhi kuze kube manje isidume ngezindawo zayo ezishisa amafutha.
2. I-Synephrine HCL- Mechanism of Action
ISynephrine iyasebenza ngokuguqulwa kokukhiqizwa kwamandla komzimba. Kwenza lokhu ngokuthinta indlela isibindi esisebenza ngayo, okuholela ekwakhiweni kwama-enzymes amaningi futhi kudlala indima enkulu kulawulo lokugaya nokukhiqizwa kwamandla emzimbeni. Ucwaningo olwenziwe lukhombisa ukuthi iSynephrine HCL (5985-28-4);
Ivimbela i-glucosidase kanye nama-amylase, angama-enzyme anecala lokugaya ukudla okubambekayo. Ngenxa yalokho, akunakwenzeka ukuthi kube nezikhala zasemuva koshukela wegazi.
Kwenyusa ukungena kwe-glucose emisipha ngokuvusa kwe-AMPK. Leyo yi-enzyme yokusebenza kwayo ukuzwa amazinga kaphethiloli emangqamuzaneni kanye nokukhuthaza ukushiswa kwamafutha. Ngaphezu kwalokho, kwandisa ukungena kweshukela emangqamuzaneni.
I-Synephrine inyusa inani le-ATP elitholakala. Lokho kunikeza amandla amaningi adingekayo ukusiza ukuphendula kwamakhemikhali esibindini.
Kuvimbela nokuguqulwa koshukela kube ngamafutha.
Kukhulisa ukuqhekeka kwe-glucose ne-glycogen.
I-Synephrine iyisisebenzisi esibuthakathaka se-alpha-1 ne-alpha-2 adrenoreceptors. Imisebenzi emibili ngokuphendula i-adrenaline yingakho inyusa umfutho wegazi nokushaya kwenhliziyo. Ngakho-ke, iSynephrine 5985-28-4 akunakwenzeka ukuthi idale ukukhuphuka kwenhliziyo yakho noma umfutho wegazi.
Lowo ngumehluko omkhulu phakathi kwe-ephedrine ne-Synephrine 5985-28-4, njengoba i-ephedrine yaziwa ngokwenza kusebenze ngokuqinile i-alpha-1 ne-alpha-2 adrenoreceptors.
ISynephrine HCL ibuye ivuselele ama-neuromedin U2 receptors. Lawa ngama-molecule atholakala kwi-hypothalamus futhi akhulisa ukuphaphama.
Imiphumela yokulwa nokuvuvukala
I-Synephrine isebenza ngokumisa ukukhiqizwa kwe-eotaxin-1. Leyo yi-molecule ekhombisa ama-eosinophil ukuthi aye endaweni evuthayo. Iphinde ivimbe umsebenzi we-NADPH oxidase, okhiqizwa ama-neutrophils futhi wona, udala izinhlobo eziningi zomoya-mpilo ezisebenzayo.
Ngokuncishiswa kokusebenza kwe-NF-kB, iSynephrine yehlisa ukuvuvukala. Lokho kungenxa yokuthi i-NF-kB egcwele ngokweqile iyaziwa ukuthi ibangela izifo zokuvuvukala njenge-psoriasis, isifo samathumbu esihlasela ukuvuvukala, kanye nesifuba somoya.
I-Synephrine isebenza ngokuvimba ama-enzyme e-butyrylcholinesterase nama-acetylcholinesterase, ayingozi ezigulini ze-Alzheimer's.
I-3. I-Synephrine HCL Sebenzisa
(1) iSynephrine HCL yokwehlisa isisindo somzimba
I-Synephrine is a ukulahlekelwa kwesisindo ezisebenza ngezindlela eziningi.
Njengendlela ukudla okucindezelayo- Ngabe uluhlobo lomuntu ohlala ehlwitha njalo? Ngiqonde ukuthi, ngisho nangemva kokudla okusindayo, isisu sakho asithathi isikhathi eside ngaphambi kokuthi iqale ukukhonkotha icele okuthile. Ngenkathi ungafuna ukwehlisa isisindo, lokhu kungenye yezinselelo ongahlangabezana nazo. Ngenhlanhla, lokhu ukulahlekelwa kwesisindo icindezela indlala nokunxenxa ukuntula, kukwenze uzizwe ugcwele maduze.
Ngenxa yalokho, ungakwazi ukunamathela ekudleni kwakho okunempilo njengoba kuhleliwe futhi wehlise isisindo ngokuzikhandla. Futhi ngaphambi kokuyiphawula, uzobe ubukisa ngalowo mzimba omncane we-bikini obukade uphupha ngawo.
(2) I-Synephrine HCL njengo-Fat Burner
Amafutha athe xaxa akuyona nje ingozi yezempilo, kepha futhi angakwenza ubukeke kabi. Ukushisa amafutha kuza nezinzuzo ezinkulu, kufaka phakathi ukukwenza uphile isikhathi eside. Ngenhlanhla, ukusetshenziswa kweSynephrine HCL kungenye yezindlela eziqinisekisiwe ongazisebenzisa ukuncibilikisa amafutha omzimba. Nakhu ukuthi kukusiza kanjani ukufeza le nhloso;
Khulisa amazinga wamandla ngesikhathi sokusebenza
Akudingeki ufike ejimini uzizwe ukhathele futhi ulele; USynephrine ukuthole. Isebenza njengophethiloli ngokukunika wonke amandla owadingayo ukuze ube neseshini yokuzivocavoca yokubulala. Amagundane aphethwe nge I-Synephrine powder babonwa bekwazile ukubhukuda isikhathi eside, okukhombisa ukuthi amazinga abo amandla ayesonyukile.
Ngokuthuthukisa amazinga wamandla, uSynephrine waziwa ngokuthuthukisa ukusebenza kwezemidlalo. Umphumela ohlangene wokusetshenziswa kwamandla kwamandla nokugqugquzela kukhuthaza ukusebenza futhi kukhuphule inani lokukhiphayo okutholakele kokuzivocavoca kwe-aerobic kanye ne-anaerobic. Lokho kwenza kube isengezo esihle sangaphambi kokuzivocavoca kanye ne- i-fat burner kakhulu.
Ucwaningo olwenziwe emadodeni ayishumi nambili luveze ukuthi ngemuva kokuthatha le mpuphu yokulahlekelwa isisindo imizuzu engamashumi amane nanhlanu ngaphambi kokuzivocavoca inyusa umthwalo wayo omkhulu. Bakwazi futhi ukuphindaphinda okuningi ngokuqhathaniswa ne-placebo. Ngokuhlanganiswa ne-caffeine, iSynephrine inyuse ukuphindwaphindwa kwezifundo eziphakeme ze-squat.
Leyo yinqubo yokwephula amafutha emzimbeni. Kuchazwa kangcono njenge-metabolism. I-Synephrine isebenza ngokwandisa isilinganiso somzimba womuntu okwenza umuntu ashise uphethiloli ngokushesha. Kuchaza ukuthi kungani ukuthatha iSynephrine kuzokwenza ushise amanoni amaningi ngoba lapho imetabolism iphakeme, umzimba wakho uzokwazi ukufinyelela kumafutha agciniwe ukuthola okuningi.
Ucwaningo olwenziwe kulo luveze ukuthi ngomthamo owodwa we-50mg, isilinganiso se-basal metabolic senyuke ngamakhalori we-65 imizuzu engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ezayo. Lapho ihlanganiswa namanye ama-molecule hesperidin ne-naringin, umfutho we-metabolic wabonwa ukukhuphuka ngaphezu kwamakhalori angaphezu kwekhulu namashumi ayisishiyagalombili. Amanani anjalo kilojoule atshiswa ngemizuzu engamashumi amabili yokugijima.
Ukuthathwa kwemisipha koshukela
I-Synephrine isebenza ngokuvuselela ukuthathwa koshukela ngumsipha wamathambo. Lokho kusiza ukushisa amafutha ngokususa ushukela ngokweqile ohlelweni lwegazi. Kuyasiza nokunikela izicubu ne-glucose esetshenziselwa kahle amandla. Ngakho-ke, ushukela we-intramuscular more kusho amandla amakhulu emisipha kanye nevolumu.
4. Isilinganiso se-Synephrine HCL
Umthamo weSynephrine HCL uyahlukahluka kuye ngomunye umuntu. Noma kunjalo, isilinganiso esijwayelekile njenge- ukulahlekelwa kwesisindo ngu-100mg ngosuku. Ucwaningo, noma kunjalo, lukhombisa ukuthi umthamo we-Synephrine HCL we-35mg nawo uyasebenza. I- Isilinganiso se-Synephrine HCL akufanele ibe ngaphezu kwe-200mg ngosuku ukugwema ubuthi.
Uma kuyisikhathi sakho sokuqala ukuyithatha, qala ngomthamo ophansi we-10-20mg ukuhlola ukubekezelela kwakho. Uma ungahlushwa yimiphumela emibi emibi, ungangezela umthamo kancane kancane. Ungangezi isikhathi sokulinganisa sibe ngaphezulu kwamahora amabili kuya kwamane, ngoba lokhu kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu.
Ngomphumela wokwakha umzimba weSynephrine noma njengesishisi esinamafutha, kufanele uqinisekise ukuthi uyithatha okokuqala ekuseni nemizuzu eyishumi nanhlanu kuya kwengamashumi amathathu ngaphambi kokuzivocavoca. Kunconywa ukuthi ubathathe ngamanzi.
Ngenkathi abanye abantu bekhetha ukuthatha iSynephrine iyodwa, abanye bangakhetha ukuyibeka. Ungayisebenzisa ngokuhlangana namanye amaphakethe wokunciphisa isisindo kanye nalawo akhulisa amandla akho. I-Yohimbine izitaki kahle nge-Synephrine, ikakhulukazi uma inhloso yakho enkulu ukunciphisa umzimba.
I-L-theanine nayo iyindlela enhle njengoba ihlangana kahle nanoma yisiphi isishukumisi. Umsebenzi wayo ukusula imiphumela nokukhulisa umsebenzi wokuqonda. Amagxolo ama-willow amhlophe angafakwa esitofini ngemiphumela yaso yokuhlangana.
I-Caffeine nayo yenza ukufakwa okuhle, kungaba ngefomu layo le-anhydrous elihlanzekile noma kusuka kweminye imithombo efana nokukhipha i-guarana.
5. Thenga i-Synephrine HCL Online
Ngaphandle kokungabaza, iSynephrine HCL iyigrail engcwele yama-powders okunciphisa umzimba. Kuyasiza ukucindezela isifiso sakho sokudla uma uhlose ukudla kancane noma ukunciphisa ukudla okulula okungenampilo. Ungase uthathe isinqumo sokwehlisa isifiso sakho sokudla Izindleko ze-Synephrine ihora elingamashumi amabili nane uma ufuna ukungena esimweni ngokushesha.
Futhi, njengoba kubonakala esihlokweni, kukugcina unamandla, okuwusizo kakhulu, ikakhulukazi uma ufuna ukusebenza futhi udle okuncane. Ngokuqondene nesikhathi esithathayo ukungena, ngeke ukholwe ukuthi kungakapheli imizuzu engamashumi amathathu, uzobe usubona umphumela. Lo mphumela ungakuthatha cishe amahora amabili njengoba isigamu sempilo seSynephrine singamahora amabili.
Uma isetshenziswe ngokuhambisana nokudla okunengqondo nokuzivocavoca umzimba, uzobona ukusebenza kweSyphrine nokwakha isisindo kungakapheli amasonto amabili okusetshenzisiwe. Noma ngubani onenkinga yokudla okulula, ukudla ngokweqile, noma lowo ozwa sengathi ufuna ukususa amafutha emizimbeni yakhe, lokhu kuyisivumelwano sangempela!
Iningi lamafutha ashisayo ayaziwa ukuthi akwenze uhlaselwe yimiphumela emibi, kepha ungakholelwa yini ukuthi iSynephrine inikeza konke lokhu ngaphandle kokubeka umzimba wakho engcupheni? Ukubuyekezwa okuningi kweSynephrine kubika okuncane kunemiphumela emibi engu-zero futhi akumangazi ukuthandwa.
Manje njengoba usuzimisele ukufinyelela ezinhlosweni zakho zesisindo, usithathaphi lesi sikiseli esinonile? Njengoba izinkampani eziningi zingathembisa ukukunikeza iSynephrine engcono kakhulu, kufanele uqaphele kakhulu njengoba abanye bengakuthengisela imikhiqizo engekho. Sikunikeza inani lemali yakho ngokukunikeza izithako ze-Synephrine eziphephile futhi ezisebenzayo. Kanye wena thenga i-Synephrine kusuka kithi, uyaqinisekiswa ukuthi uzoshisa amanoni ulahlekelwe ngamafutha ngokushesha nangonaphakade.
Izithasiselo zethu zokwehla kwesisindo azinabungozi ngoba ziyi-100% yemvelo ngaphandle kokungeziwe okufihliwe. Hlela i-powder 'yesimangaliso' yokulahlekelwa isisindo kithi namuhla bese ulahlekelwa amakhilogremu angafuneki futhi ujabulele izinzuzo zokwakha umzimba zeSynephrine.
Incwadi ethi The Health Professional's Guide to Dietary Supplements, kaShawn M. Talbott, Kerry Hughes, ikhasi 13
Ukukhuluphala: I-Epidemiology, i-Pathophysiology-and Prevention, i-Second Edition, ihlelwe nguDebasis Bagchi, uHarry G. Preuss, ikhasi 538
Izithasiselo Zokudla Okunomsoco KwezeMidlalo Nokuzivocavoca, ezibhalwe nguMike Greenwood, uDouglas Kalman, uJose Antonio, ikhasi 231
I-Isotretinoin emnyama (i-Accutane) yezinkuni: Ukuphatha i-Acne ne-Isotretinoin
Isingeniso Esiphelele ku- "Killer Cancer Killer" Gefitinib
I-Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) isebenza kanjani abakhi bomzimba Ngabe u-Orlistat usebenza kanjani njengomuthi wokulahlekelwa kwesisindo?
Copyright © 2021 aasraw Wonke amalungelo agodliwe.
Ukuzikhulula: Asenzi izimangalo ngemikhiqizo ethengiswa kule webhusayithi. Alukho ulwazi olunikezwe kule webhusayithi oluye lwahlolwa yi-FDA noma i-MHRA. Noma yiluphi ulwazi olunikezwe kule webhusayithi lunikezwa ngokwazi kwethu futhi akuhloselwe ukufaka izeluleko zikadokotela oqeqeshiwe. Noma yibuphi ubufakazi noma ukubuyekezwa komkhiqizo okunikezwe amakhasimende ethu akuyona imibono ye-aasraw.com futhi akufanele kuthathwe njengezincomo noma iqiniso.
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.gdc-sherb.com www.cmoapi.com www.apicdmo.com